प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना प्रवल रहेका सुगा सत्तारुढ दलको प्रमुखमा निर्वाचित -
प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना प्रवल रहेका सुगा सत्तारुढ दलको प्रमुखमा निर्वाचित
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०९:१९ । जापान
जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रयाटिक पार्टीको प्रमुखमा सोमबार योशिहिदे सुगा निर्वाचित भएको छ । यसै हप्ताको अन्त्यमा सुगा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएमा उनलाई जापानको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने छ ।
सोमबार भएको पार्टी भित्रको निर्वाचनमा उनले ३७७ मत प्राप्त गरेको थियो । सुगासँग प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व विदेशमन्त्री फुमिओ किशिदाले ८९ र पूर्व रक्षामन्त्री शिगेरु इशिबाले ६८ मत मात्रै प्राप्त गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री सिन्जे आबेको अति निकटस्थ पात्रका रुपमा रहेका ७१ बर्षीय सुगालाई धेरैले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्न थालिसकेका छन् । सुगाले आबे नेतृत्वको सरकारमा सरकारको मुख्य प्रवक्ता र मन्त्रीपरिषद्को मुख्य सचिवका रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो ।
जापानको संसदमा अहिले सुगाले आजदेखि नेतृत्व गरेको पार्टीको बहुमत रहेकाले उनकै पार्टीले बनाएको उम्मेदवार नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेछ । पार्टीको प्रमुख निर्वाचित भएपछि उनले देश र जनताको लागि काम गर्न आफु सँधै प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘ मेरो लगाव सवै देश र जनताका लागि हुनेछ, म त्यसैका लागि काम गर्नेछु,’उनले भने ।
सुगाले आफुले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको लडाईमा दिने र जापानी अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने बताए । त्यसका लागि सवैको तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री आवेले केहीदिन अगाडि अस्वस्थताको कारण देखाउदै प्रधानमन्त्री पद त्यागको घोषणा गरेको थियो ।
आवे शुरुमा सन् २००६ देखि २००७ सम्म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको थियो । त्यतिबेला पनि अस्वस्थतालाई कारण देखाउदै पद त्याग गरेका आबे स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सन् २०१२ मा फेरी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचत भएको थियो । त्यसपछि केही दिन अगाडिसम्म उनी लगातार प्रधानमन्त्री भएको थियो । आवे जापानमा सबैभन्दा लामोसमयसम्म प्रधानमन्त्री बनेको नेताका रुपमा चिनिन्छ ।
आवेको कार्यकाल अझै झन्डै एक बर्ष बाँकी नै थियो । उनले सरकारको नेतृत्व गरेका बेलामा सुगाले अति निकट भएर उनीसँग काम गरेको थियो । जापानमा अहिलेपनि आबेलाई अति लोकप्रिय नेताका रुपमा लिइने र पार्टी भित्र पनि उनको प्रभाव अत्यधिक भएकाले उनले अगाडि सारेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने देखिएको छ । आवेले अप्रत्यक्ष रुपमा अगाडि सारेकै कारणले सुगालाई सोमबार पार्टी प्रमुखमा निर्वाचित गरिएको बताइएको छ ।
साउदीमा तीन लाख १४ हजार कोरोना संक्रमित निको
साउदीमा मंगलबार १२ सय कोरोना संक्रमित निको
साउदीमा कोरोना निको हुने बढ्दै, सोमबार नयाँ संक्रमित ४९२ जना
कोरोना संक्रमित संख्या बढे पनि भारतको ताजमहल खुल्यो
साउदीको दमाम-काठमाडौं नौ उडान थपियो, एक हजार कोरोना संक्रमित निको
गरिबी निवारणका लागि चीनले पाँच वर्षमा १५ खर्ब युआन परिचालन
१. अब वालेटबाट रेमिट्यान्स सेवा
२. साउदीबाट चार एयरलाइन्सले १२ चार्टरउडान गर्ने
३. कोरोना कहरमा ‘बन चरी’ गीत सार्वजनिक
४. तामाङ डायस्पोरा एकरुपताको डायस्पोरा होइन
५. साउदीमा तीन लाख १४ हजार कोरोना संक्रमित निको
६. सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा